Isiqithi sokuzola eLadánybene
Indlu ekumhlaba osikelwe izindlu yonke sinombuki zindwendwe onguZsolt
ILadánybene, umda welali, umoya wasemaphandleni, ukuqubha ebhafini phantsi kwesibhakabhaka esineenkwenkwezi ... Indawo yokuhlala epholileyo, izimuncumuncu ezibhaka e-oveni, iwayini e-mulled, ibranti, ubumnandi, ubumnandi! Ucinga ukuba oko kuvakala kulungile? Yiza kuthi, sijonge ukukubona!
Ukufika ekhaya, kukho indawo ebanzi, ebiyelwe yokupaka iimoto ezi-5-6. Indawo yokupaka ibonelela ngokufikelela ngokulula kwibala lokudlala elisandula kwakhiwa kunye ne-saletli enophahla olunophahla, apho kunokuthi kubanjwe isidlo sasemini sosapho kunye namatheko omhla wokuzalwa. Intandokazi yabahambi abancinci, i-bungalow eyakhiwe phakathi kwamagqabi, ikwakhona apha, apho umbono omangalisayo wefama yonke uvuleka phambi kwabo.
Izakhiwo ziyakwazi ukuhlalisa abantu abayi-6-8, apho abantu be-4-6 banokuphumla ngokukhululekileyo kwiNdlu enkulu esanda kwakhiwa kunye ne-2 kwiNdlu endala kwindawo ekufutshane.
Isici esikhethekileyo seNdlu enkulu kukuba ukunikezelwa kwamandla kubonelelwa ngamapaneli elanga abekwe phezu kophahla lwendlu, adityaniswe kuthungelwano lombane, ukuze sikwazi ukugcina iindleko ezibalulekileyo. Kwiinyanga zasebusika, ukufudumeza kunikezelwa ngesitofu esifakwe ngamatye kunye negesi.
Xa siqulunqa izinto zangaphakathi kunye nesitayela se-cottage, sazama ukugcina i-atmospheric yasemaphandleni, esiye sadibanisa neyona mihla, ingqiqo yokuphila ecocekileyo.
Njengoko singena kweso sakhiwo, kuvuleka igumbi lokutyela elinophahla oluphakamileyo phambi kwethu, elahlulwe kwigumbi lokuhlala elitofotofo ngesitovu esifakwe iithayile. Ebusika, kuyimvakalelo efudumeleyo yokuphulaphula i-crackle yomlilo, nokuba ulele kwi-sofa okanye uphuze iwayini e-mulled kwinkampani yencwadi enomdla.
Kwindawo enye negumbi lokutyela, kukho ikhitshi elixhotyiswe kakuhle elineefestile ezijonge yonke intendelezo kunye nebhankethi yabantwana. Kukho negumbi lokuhlambela elinendlu yangasese eyahlukileyo, ishawa kunye nomatshini wokuhlamba.
Ukusuka kwigumbi lokutyela, i-staircase ikhokelela phezulu, apho i-corridor evulekile ihlula amagumbi. Ukusuka kwi-corridor unokubona igumbi lokudlela, kwaye ukusuka kwelinye lamagumbi, ngeefestile ezincinci ngaphakathi, ukuya ekhitshini nakwigumbi lokuhlala. Elinye igumbi likwindawo enye nepaseji kwaye alinacango elahlukileyo. Amagumbi afanele abantu abatshatileyo, abangabodwa kwaye banokuthatha ibhedi eyongezelelweyo xa becelwa.
Ime kwizinyuko ezimbalwa ukusuka kwiNdlu eNkulu kunye neziko lethu lempilo encinci, elivula kwintendelezo. Le yindlu encinci yokuzimela eyakhiwe kwigumbi elidala elinemithi, kwaye ifenitshala ekuyo ibonisa umsebenzi wezandla zethu zegolide. Ndimele ndiqaphele ukuba ababuki zindwendwe bakho bangumthandi wenyani we-antique. Yonke into endala ifihla iingcamango ezintsha kuye, athanda ukuyiphumeza, kodwa mhlawumbi imifanekiso iyathetha.
Indlu endala ngoku inekhitshi layo elinegumbi lokuhlambela elineshawa kunye negumbi lokulala elinesitovu sothando esinethayile ngokwenene.
Inxalenye yefama nayo yindlu yentlalontle eyenziwe ngogcino oludala, apho kukho igumbi elincinci elilungele ukuphumla kunye neshawa kunye nendlu yangasese. Indawo yokuvula isauna eyadini nayo yakhiwe kwigumbi lentlalontle, endingenamagama aneleyo kuyo.
Kungamava angakholelekiyo ukubukela ukwisauna njengoko ikhephu elimhlophe liwela eyadini ebusika, njengoko isitovu seenkuni sitshisa amanzi ebhafu kwaye umphunga oqhumayo udanisa ngokucothayo namahlwantsi ekhephu, kwaye sihlala apho. kwindawo eshushu...
Ukuba oko bekungonelanga, sikwacebisa indawo yokuthengisa iwayini, enegumbi lokutyela elidibanayo kunye ne-oveni efikelela kubantu abangama-20. Apha unokuba nesidlo sangokuhlwa ngeempelaveki, amaqela e-bachelorette, amaqela e-bachelorette, isikhumbuzo sosapho, ukubhaka nabahlobo e-oveni, ukuxhelwa kweehagu, okanye imitshato emincinci.
Entsha Tanyacsárda (Felsőlajos)
ihashe - ukukhwelwa kwinqwelo
- ihashe Bonisa
- ukukhwela umntwana kwi-paddock evaliweyo
-Ukubukela izilwanyana zasekhaya eziphilayo
- ukuphulula ibhokhwe encinane
Ezi nkqubo zifumaneka yonke imihla ukususela ngo-11:30 kusasa, nokususela ngeye-9 kusasa ngoLwesibini, ngooLwezithathu nangooLwezihlanu.
Emva koko unokufumana isidlo sasemini, ukutya kwabo kulunge kakhulu, singabacebisa kuphela!
Ifama yaseVarga (Kerekegyháza)
Ungaphinda ubuze malunga neenkqubo zabo zangoku kuthi okanye kwiwebhusayithi yabo.
Abantwana abadala nabo banokuhamba beqabela ilizwe apha.
Ukutya kwe-la carte akufumaneki apha, yimenyu yemihla ngemihla kuphela enikezelwayo.
Indlu enkulu yaseGeréby (Lajosmizse)
- ukubaleka ukukhwela
- ukukhwela ilizwe
Ekukhweleni ilizwe, ukuzinza kwendwendwe ehleli ehasheni kugwetywa ngokwesiseko sophando lwangaphambili, kwaye ke kuphela kuvunyelwa ukukhwela kunye nekhatshwa.
EFelsőlajos, imizuzu eli-15 ukusuka eLadánybene, indawo yokugcina izilwanyana yabucala yavula iingcango zayo ngo-Epreli 4, kwaye inokufumaneka kwi-Intanethi njengeZoo yaBucala.
Buza malunga namatikiti okungena kunye neeyure zokuvula kunye nathi nakwiwebhusayithi yabo.
De kufike iindwendwe zethu, sinokuhlala sinxibelelana ku-Airbnb wemiyalezo nangefowuni okanye nge-imeyile. Ilungu leqela lethu lilindile efama kwaye likhokela abo bafuna ukuphumla. Abo bafuna ukuphonononga indawo engqongileyo banokukhetha kwiinkqubo ezahlukeneyo, nokuba kukutyelela i-Kecskemét, isilwanyana esifuywayo kwi-zoo ejikelezileyo, okanye ukuhamba okumnandi okanye ukukhwela ihashe kwiindawo zokuhlala ezingqongileyo.
De kufike iindwendwe zethu, sinokuhlala sinxibelelana ku-Airbnb wemiyalezo nangefowuni okanye nge-imeyile. Ilungu leqela lethu lilindile efama kwaye likhokela abo bafuna ukuphumla.…
Inombolo yomthetho: EG19008830